0622Vatsimpanahy - FJKM Amparibe Famonjena
Vatsim-panahy Jona 2022
Perikopa : Salamo 143: 7-10 ; Lioka 2 : 25-32 ; 1Korintiana 6: 12-20
« Fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazà an’Andriamanitra amin’ny tenanareo.” 1Korintiana.6: 20
Mitandrema mandrakariva isika kristiana raha mifanerasera amin’ny jentilisa. Tontolo efa ilaozantsika izany ka tsy azo hiverenana intsony. Aoka isika hisaina hatrany ny fiainam-baovao maha kristiana antsika ka hitondra tena mifanaraka amin’izany. Hamasino hatrany ny tenantsika araka ny maha-tempolin’Andriamanitra sy rantsam-batan’i Kristy ny mpino.
Ny tany Korinto tamin’ny fotoanan’ny Apostoly dia nanana ny filozofiany, tsy miraharaha ny momba ny fitondrantena kristiana. Nanao ny fijangajangana ho tsy mampaninona, nefa dia fahotana mihatra amin’ny tena sy ny fanahy izany. Koa dia nanarin’ny Apostoly mafy ireo.
Miantefa amintsika kristiana ankehitriny, indrindra ireo tompon’andraikitra nametrahana fitokisana, ray aman-dreny mitaiza, ary ny tanora eto amin’ny fiangonana izao vatsim-panahy izao. Meteza isika rehetra hofenoina ny Fanahy Masina mba hahalala izay maha-olom-boavidin’ny Tompo antsika ka hahay mankalaza an’Andriamanitra amin’ny tenantsika.
Olom-boavidy ny mino
Ny asam-panavotana nataon’i Jesoa Kristy no ambara amin’izany. Ny fisoloan’i Jesoa ny mpanota rehetra teo amin’ny hazo fijaliana no fanoneran-trosa fahatontosan’ny fanavotana. Fividianan’Andriamanitra azy mba tsy ho andevozin’ny fanjakan’ny aizina dia i satana sy ny forongony.
Tonga fananan’Andriamanitra izy
Tsy ananan’ilay ratsy fahefana intsony, fa efa manana ny Tompony ny mino dia Jesoa Kristy, Ilay nividy azy. Tsy an’i satana intsony, ary tsy tompon’ny tenany fa ny Tompo no Tompony. Tsy mandeha araka ny filan’ny nofony tahaka ny fahiny intsony fa mandeha araka ny Fanahy indray (Gal.5:16; 5:19-21 , 22-24).
Sarobidy amin’Andriamanitra ny mino satria novidiny lafo
Ny zanaka lahitokan’Andriamanitra mihitsy no foiny nividianana azy (Jao.3:16). Jesoa Kristy nahafoy ny ainy no fanavotana antsika ho afaka amin’ny fatorana sy ny gejan’ny fahavalo mamono sady mahavery. Tena lafo tokoa ny tombam-bidin’ny mino amin’ Andriamanitra hany ka sarobidy Aminy.
Aoka samy handini-tena isika mamaky ny Sal.143:7-10.
* Mangataka sy mitaraina fatratra mba hahafahana amin’ny fahoriana:
* Ho eo anatrehan’ny tavan’i Jehovah hatrany;
* Mitady fiarovana azo antoka amin’ny fahavalo
* Mangataka hotarihin’ny Fanahin’Andriamanitra.
Ho antsika kristiana rehetra, tsarovy fa fananan’Andriamanitra sady sarobidy Aminy isika; koa tandremo ny manimbazimba ny maha-tempolin’Andriamanitra ny tenantsika amin’izay tsy mahasoa sady mahavery mandrakizay.
Ho anareo tompon’andraikitra, atokany tanteraka amin’ny asa fanompoana ny momba anareo, satria efa an’ny Tompo tanteraka ianareo. Tanteraho ny fiantsoana anao sy ny fanekena nataonao.
Mankalaza an’Andriamanitra amin’ny tenany ny mino
Ny famonjena izao tontolo izao dia dia tanteraka tamin’ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Fandresena ny fahavalo rehetra izany. Tsy manan-kery amin’ny mino intsony ny hery sy ny fanindronan’ny fahafatesana. Afaka tanteraka teo amin’ny fanjakan’ny maizina ny mino, ary tafafindra ho vahoakan’ny fanjakan’ny mazava mandrakizay. Ny ataon’ny mino no setrin’izany.
Manome voninahitra an’Andriamanitra
Fanehoana fankasitrahana sy fandraisana ny fanomezana sarobidy natolotr’ Andriamanitra izany. Fahatsapana ny maha zava-dehibe ny vitan’Andriamanitra ho an’ny tena izany. Tsy misy anefa asa na fomba ahazoantsika mamaly izany afa-tsy ny fisaorana sy ny fankasitrahana Azy amin’ny alalan’ny fanomezam-boninahitra ihany. Tsy mitaky amintsika izay tsy vitantsika ny Tompo afa-tsy ny fankalazantsika Azy eram-po, eran-tsaina, eram-panahy ihany.
Manamasina ny tena ho an’ny Tompo
Ny olona mahalala ny halehiben’ny fitiavan’Andriamanitra no afaka manokana ny tenany ho an’ny Tompo. Io no fanoloran-tena kristiana ambony sy mendrika indrindra, ary sitrak’Andriamanitra. Ny kristiana manamasin-tena ho an’ny Tompo dia mahatanteraka ilay ambaran’ny Apostoly Paoly hoe: “efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany sy ny filany tamin’ny hazo fijaliana” satria efa an’i Kristy Jesoa tanteraka izy (Gal.5:24), ary mandeha araka ny Fanahy, izany hoe manaiky hofenoina ny Fanahy Masina izy.
Saino tsara ny ambaran’ny Lio.2:25-32
* Natoky sady niandry am-paharetana ny teny fikasana nambaran’ny Fanahy Masina.
* Nahalala ny fahatongavan’ny fotoana, ka nahita izany.
*Nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny hira fiderana (manificat de Simeon).
* Ry kristiana zanak’Andriamanitra, mahaiza sy mazotoa mankalaza an’Andriamanitra amin’ny tenanareo.
* Ho anareo tompon’andraikitra : tandremo ny mametraka fialana satria tsy olona no anaovanareo izany fa Andriamanitra. Ireny no atao hoe mitsoaka,
mikomy, mandositra ny fifidianan’Andriamanitra azy; kanefa “ny fifidianan’Andriamanitra sy ny fanomezam-pahasoavany dia tsy misy hanenenany” (Rom.11:29).
* Samia mangataka mba hofenoina ny Fanahy Masina mandrakariva hahatanterahana ny fiantsoany.
Raharijaona Solofonirina Mpitandrina